Forum serasera malagasy Hanao ahoana ny ho avin'i Eoropa amin'ny fandresen'i #Tsipras #Syriza - Dinika forum.serasera.org
Hanao ahoana ny ho avin'i Eoropa amin'ny fandresen'i #Tsipras #Syriza
Lohahevitra : Vaovao tselatra
Fitohizan'ny hafatra : Hanao ahoana ny ho avin'i Eoropa amin'ny fandresen'i #Tsipras #Syriza
hery - 25/01/2015 20:03
Na dia mbola tsy ofisialy aza ny voka-pifidianana dia efa hita fa miha tanteraka ilay natahoran'ny sasany amin'ny toe-draharaha ao Grece. Hahazo ny maro an'isa ao amin'ny antenimieram-pirenena Grika ny antoko havia Syriza izay tarihan'i Tsipras.
Talohan'ny fifidianana dia nalaza be ny resaka hoe ho simbain'ny fahalanian'ny antokon'i Tsipras ny firaisan'i Eoropa. Kanefa nony efa manomboka hita hoe matanjaka ny Syriza dia niova indray ny fijery ka lasa hoe "Mety haha mafy orina an'i Eoropa nyfahalanian'i Tsipras"
Dia ho hita eo hoe hanao ahoana tsara ny ho avin'i Eoropa.
Ny fantatra aloha dia anisan'ny nampanantenaina tamin'ny fampielezan-kevitra hoe tsy hanaraka ny toromarika eoropeanina amin'ny politikan'ny fitsitsiana intsony ry zareo fa izany no nampijaly ny vahoaka hatramin'izao. Ny fialan'i Grika amin'ny Euro no tena atahorana, ary efa nilaza an'izany rahateo i Angela Merkel. Ny voka-dratsiny dia mety ho afoy avokoa ny trosa izay nalainy tamin'ny Fivondronana Eoropeana.
Miandry ny tohiny izany aloha.